Abwaan Hadraawi oo Faallo ka bixiyey Buug Cusub oo ka Hadlaya Maansada Soomaalida | Ogaalnews	CIMILLADA HARGEYSA
Abwaan Hadraawi oo Faallo ka bixiyey Buug Cusub oo ka Hadlaya Maansada Soomaalida
TweetHargeysa, 02 August, 2012 (Ogaal)- Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi), ayaa ka ka hadlay Buugga “Culuumta Maansada” oo uu qoray Siciid Maxamuud Gahayr oo ka mid ah dhallinyarada qalin-maalka ah ee Somaliland, isla markaasna wax ka yaqaanna Suugaanta kaas oo koobay aqoonta xeesha dheer ee ay ku dhisan tahay maansada Soomaalidu.
Buuggan ayaa waxa akhriyay, waxna ka yidhi intii aan la daabicin, haldoor faro badan oo uu ka mid ahaa Abwaanka weyn ee Maxamed Ibraahin Warsame (Hadraawi).
“Marka hore aan idhaahdo Siciid Maxamuud Gahayr waa wiil aad u da’yar, ujeedooyinka buuggani xambaarsan yahay aad bay uga da’weyn tahay isaga. Waxaan horta Siciid ku hambalyeynayaa sida uu ugu dhiiraday in uu nolosha wax ku soo kordhiyo iyo in uu qoraalkiisa ku bilaabo hantida ummadda iyo baadidoonkeeda ku saabsan suugaanta ay Soomaalidu leedahay, taasoo runtii ah ujeedo aad u culus. Waxaan odhan karaa ujeedadaas uu Siciid abbaaray waa ku dhac geesinimo leh. Siciid baabka suugaanta iyo dedaalkiisa wuu u talo badsaday, waayeel iyo wax-garad ayuu la tashaday oo ku yidhi “wax igu biiriya”, talo badsigaasna Siciid kumuu khasaarin, waxa Siciid taa u barbar taal, wuxuu faaqiday Miisaanka Maansada oo isna maanta faaqidaadiisu badka taal, waxaan Siciid u rajeynayaa in uu helo fursad uu ku sii kordhiyo dedaalkiisa.” ayuu yidhi Abwaan Hadraawi oo ka faalloonayay buuggan ka hor intii aan la daabicin.
Buuggan ayaa ah mid koobaya aqoon badan oo ku ladhan maansada Soomaalida sida qaybaheeda, shuruudaheeda, doorkeeda taariikha, hummaageynta, ujeeddooyinka loo allifo, miisaanka maansada, ujeeddada maansada loo allifo, waxtarna u leh bahda suugaanta.
Buuggan ayaa illaa iyo hadda laga heli karaa suuqyada dalka Sweden iyo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland.
Maxaad ka taqaanaa astaamaha Cudurka Qoorgooyaha iyo sida loo daweeyo ? - 32,892 viewsSomaliland: If Eritrea & South Sudan Could Gain Sovereignty, So Could Somaliland - 17,192 viewsSomaliland hopes for international recognition - 15,823 viewsGaddafi:’It’s a conspiracy to take our oil and a plan to re-colonise our country’ - 14,921 viewsHead of Uganda EC: I will announce winner within 48 hours - 11,784 viewsDalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan - 11,565 viewsSomalia: Exposing the Hideous Face of the Puntland Regime - 11,463 viewsTel Aviv: Hostage Drama in Turkish Embassy - 11,180 viewsIGAD with the Largest Donors Delegation arrives Somaliland - 10,896 viewsSomaliland Coastguards and Ground Troops—The Real Panacea for Sea Piracy - 10,854 views